Maxay yihiin Ciidamada ay isku Raaceyn Farmaajo iyo Saraakiisha inay deg deg ugu baxaan Muqdisho ? | Nabadqaad Online
Maxay yihiin Ciidamada ay isku Raaceyn Farmaajo iyo Saraakiisha inay deg deg ugu baxaan Muqdisho ?
Waxaa maalmihii ugu dambeeyey kulamo xasaasi ah lahaa saarkiisha ciidamada Dowladda iyo madaxweynha Soomaaliya waxaana hadda go’aan cad laga saaray in magaalada Muqdisho laga bixiyo qaar kamid ah ciidamada.
Waxaa hadda la go’aamiyey in ciidamada Militariga magaalada Muqdisho laga saaro sida ay isku raaceyn Taliyeyaasha ciidamada Qalabka sida ee Milateriga, Booliska, iyo Nabadsugidda.
Saraakiisha ciidamada ayaa ku sababeeyey amni xumada ka jirto Muqdisho inay qeyb weyn ka tahay ciidamada badan ee ku sugan caasimadda kuwaas oo mararka qaar buux dhaafiyo wadooyinka iyo xafaadaha magaalada.
Amarkaan ayaa imaaday markii uu askari ka tirsan ciidamada Militariga shalay dil ugu geystay qof shacab ah isgooska Km5 ee magaalada Muqdisho wuxuuna dilkaas imaaday markii uu rasaas ula kac ah ku furay gaari uu watay marxuumkaas.
Madaxda ciidamada ayaa ku heshiiyey inuu amarkaan dhaqan galo maanta oo ay taariikhdu tahay 7 March, waxaana ciidamada Militariga lagu amray inay tagaan xerooyinka iyadoo la amray in maxkamad la hor keeno askarigii militariga ka tirsan oo la arko isagoo muqdisho hub ku wato.
Madaxweynaha ayaa saraakiisha faray inay la imaadaan hab ay magaalada amnigeeda u sugaan waxayna tallabadaan u arkeyn inay tahay midda ugu horreyso ee amaanka lagu sugi karo.